(Hal aqal (Unicameral) mase laba aqal (Bicameral) habkee Soomaaliya u fiican
1. Hawsha sharci dejinta oo hal meel ka socota oo aan is jiijiid iyo waqti lumis lahayn;
2. Xildhibaanada oo giddigood ah xildhibaano qaran oo gobol gaar ah u xaglineyn;
3. Dawladaha addunka ku nool xooggooda (115 dawladood) oo habka halka aqal isticmaala, horumarna ku gaaray.
4. Kharashka iyo hawl wadeenada baarlamaanka oo kooban.
1. Labada aqal waxey culeys iyo curyaamin ku ridayaann sharci dejinta dalka oo marba aqal waqti qaali ah ku lumiyo, si hal sharci loo dhaqan geliyana qaata waqti dheer oo gaari kara sannad iyo wax ka badan;
2. Danaha guud ee qaranka iyo kuwa dawlad goboleedyada oo isku dhaca, lana kala garan waayo kee la hormariyaa oo labadooda dalka u muhimsan;
3. Kharash iyo culeys badan oo kora khasnadda dawladda dhexe;
4. Labada aqal oo is afgaran waaya amaba is canaada, sidaasna ay ku baab’ado danti weyneed ee Qaranka Soomaaliya uu lahaa.
1. In dawlad goboleedyadu yeeshaan wakiilo ay si toos ah u soo dirsadaan oo ayaga si toos ah uga amar qaata, kana shaqeeya danaha gobolkooda;
2. In sharciyada dawladda dhexe ee danta dawlad goboleedyadooda ka soo horjeeda ay gaashaanka u daruuraan, amaba dib u dhigaan dhaqan galkooda;
3. In odayaasha laga dambeeyo ee gobolku helaan derejo sharafeed, gunno iyo tixgelin muddada ay xilka golaha hayaan;
4. In aqalka sare awood u yeelanayo dedejinta sharciyada si toos ah u khuseeya gobolladooda amaba guud ahaan khuseeya federaaleynta iyo awood baahinta dalka.
1. Tirada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah;
2. Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka ah waxay aqalka sare ku yeelanayaan xubno tiro isla eg.
3. Tirada guud ee xubnaha Golaha Aqalka Sare waa inay metilaad isu dheelli tiran ku yeeshaan dhammaan qeybaha bulshada.
1. Golaha shacabka ee qaran (aqalka hoose) oo awood sharci dejineed oo xad dhaaf ah yeesha.
2. Xildhibaannada qaran oo iska illooba danaha gaarka ah ee gobollada ay ka soo jeedaan, kuna mashquula danta guud ee qaranka oo keliya;
3. Dalka halka aqal leh oo ku mashquula horumarinta Caasimada oo keliya;
4. Xubnaha aqalka hoose oo iskala weynaada gobolladi laga soo doortay, dibna aan ugu soo laabanin ilaa doorashada kale laga gaaro.